"Ukuphetha" (ukugqiba) Ukudibanisa ngesiFrentshi?
Ukuxilongwa kwesiNgqungquthela esingavumelekanga sesiFrentshi Ufuna ukuyikhumbula ngekhanda
"Ukugqiba" ngesiFrentshi isenzi isiphetho . Ngelixa lilula ukuba likhumbule, izenzo zokubambisana ziya kuba ngumngeni kubafundi abathile baseFransi. Kungenxa yokuba ukugqiba isenzi esingaqhelekanga kwaye sabelo saphethini ngamagama ambalwa kuphela.
Ukudibanisa isenzi sesiFrentshi Siphetha
Ngokungafaniyo nezinye izenzi-magama zesiFrentshi, ukugqitywa akulandelanga isenzo somntu oqhelekileyo .
Ukugqiba isenzi esingaqhelekanga kwaye iziphelo ezahlukeneyo zifunyenwe kuphela kwezinye izenzi eziphela . Oku kubandakanya ukubandakanya (ukubandakanya) , ungabandakanyi (ukuba ungabandakanyi), kwaye ungasebenzi (ukuba ungene).
Ngoxa ufumana ezi zinto zilukhuni kunzima ukuzikhumbula ngeenkumbulo, ukufunda zonke ezine ngexesha elifanayo ingcinga efanelekileyo. Kungenxa yokuba eli qela elincinci libandakanya ukuphela okungapheliyo kwisenzi sesenzi.
Kwimeko yokugqiba , isiqhamo sigqiba- . Kuba i (I) ikhona ixesha, i- add-on ifom " ndiyifake ." Ngokufanayo, - iironi zongezwa kwisitshixo sokwakha ixesha elizayo (thina) kwifom, " sisi conclurons ." Gcina ezi ziphezu kwengqondo uze uzisebenzise ezinye iilwimi.
ziqeshwe kugqiba kugqiba
sigqibo kugqiba kugqiba
kugqiba conclurons kugqiba
kugqiba kugqiba kugqiba
kugqiba concluront gqityiwe
Ukuthatha Inxaxheba Kwanoku Ukugqiba
Ukongeza - intsimbi kwisigxina sokuphelisa kukunika inxaxheba kwisigqibo .
Nangona isoloko isetyenziswe njengesenzi, kukho kwakhona amaxesha apho uya kufumana iluncedo njengesigqibo, isi-gerund, okanye igama.
Ixesha elidlulileyo kwisiFrentshi liyakuboniswa ngokusebenzisa ukungapheleli okanye i- compé compé . Ixesha elidlulileyo lifuna ukukhumbula kancinci, kodwa isebenzisa ukwakha okulula kubalulekile ukwazi.
Ukwenza oku, qalisa nge-conjugate yesenzi esincedisayo kufuneka ufanise nesigama sakho sesigama. Emva koko, qha ga mshelana . Ngokomzekelo, "ndagqiba" " ndigqibe " kwaye "sagqiba" kukuba " sigqiba ."
Okulula ngakumbi Ukugqiba ukuCombulula ukuLwazi
Xa ufuna ukuchaza uhlobo oluthile lombuzo kwisenzi esiphethweyo , ukusetyenziswa kwamagama okanye izimo zesimo esetyenziswayo. Ukuzithoba kuyasetyenziswa xa isenzi siqinisekanga kwaye sinemeko xa kuxhomekeka kwiimeko .
Kwiincwadi, unokufumana iifomu ezilula okanye ezingaphelelanga . Ezi zinqabile kwaye, ubuncinci, kufuneka ube nako ukuzibona njengento yokuqhawula .
iqulethe sigqiba ziqeshwe i-conclusse
kugqiba sigqiba ziqeshwe iincinci
iqulethe gqibela sigqibo conclût
kugqiba kugqiba iziqhelo iziphumo
kugqiba kugqiba i-conclûtes conclussiez
kugqiba kugqiba kugqiba ngokugqithiseleyo
Ukubonisa ukugqiba kwisivakalisi , isicelo esifutshane, okanye umyalelo, sebenzisa ifom efunekayo . Xa wenza njalo, akukho mfuneko yokubandakanya isigama sesigxina : sebenzisa " isigxina " kunokuba " uququzelele ."
Indlela yokuthayipha i-Accents yesiFrentshi: Iikhowudi ze-Accent neeNqutshane
Iimpawu eziMibini zaseNtaliyane: Indlela yokuziCoca kunye nokuzisebenzisa
Indlela yokusebenzisa isenzi sesiFrentshi 'Ukuhlawula'
Sore de kimatta - Iimpawu ezilula zaseJapane
Oko Kufuneka Ukwazi Ngezigidi ze-Biomes
Uqwalaselo olungapheliyo lweModeModel